t-mobile wuxuu diyaarinayaa kor u kaca qiimaha (oo laga yaabo) inuusan wax shuqul ah ku lahayn ku biiritaanka orodka
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista T-Mobile waxay diyaarinaysaa kor u kac qiimo leh oo (malaha) aan shuqul ku lahayn ku biiritaanka Sprint
T-Mobile waxay diyaarinaysaa kor u kac qiimo leh oo (malaha) aan shuqul ku lahayn ku biiritaanka Sprint
Mideynta udhaxeysa shirkadaha bixiya adeegga wireless-ka seddexaad iyo afaraad ee ugu weyn America & apos; heshiis aad u qurux badan markii ugu dambaysay , laakiin inta 'T-Mobile-ka cusub' ay dejineyso himiladeeda hogaaminta kacaankii 5G iyo loolanka Verizon / AT & T duopoly muddo yar ka hor, welwelka qaarkood ee ku saabsan saamaynta taban ee ka iman kara midowga shaqaalaha warshadaha (iyo dadka) sidoo kale way sii kordhayaan.
Hal shay, waxay umuuqataa taas T-Mo waxay horey shaqada uga ceyrisay qaar ka mid ah shaqaalaha meheradaha lacag bixinta , tallaabo dad badani filayaan inay ku xigi doonto dhowr wareeg oo dheeri ah oo shaqada laga ceyrinayo bilaha soo socda. Dabcan, cabsida ugu weyn ayaa wali ah in xoojinta suuqa soo socota ay horseedi doonto kor u kaca qiimaha kala duwan ee macaamiisha , laakiin inkasta oo waqtiga la dareemayo ugu yaraan waxoogaa shaki ah, Un-side wuxuu ku adkeysanayaa an Abriil 18 waxay u badashaa qorshayaasheeda Ilaalinta 360 shaqo kuma laha midow ay u badan tahay in isla bishaas la soo gabagabeeyo .
Halka dadka oo dhami uma muuqdaan inay iibsanayaan sharraxaadda Magenta & apos; , tani macno ayey samaynaysaa, maaddaama 'celceliska qiimaha aaladda casriga ah' ay runtii 'si joogto ah kor ugu kacday' dhawrkii sano ee la soo dhaafay, iyadoo 'aalado badan oo cusub oo cusub ay hadda ku kacayaan in ka badan $ 1000', oo ahayd dhul aad u badan oo mamnuuc aan fogayn . Sidan oo kale, T-Mobile waxay sheeganeysaa qaab-dhismeedka qiimaha ee loogu talagalay qorshooyinka Ilaalinta 360 waxay u baahan tahay 'hagaajin' sidaas darteed shabakadda bilaa-waayirka ah 'way sii wadi kartaa bixinta faa iidooyinka weyn' ee u oggolaanaysa macaamiisha inay ilaaliyaan 'qalabkooda qiimaha leh.'
Qalabka ugu qiimaha badan wuxuu u baahan doonaa qiime bille ah oo ah $ 18 qorshaha Ilaalinta 360 Tier 5 & BYOD oo ka bilaabmaya bayaankaaga biilka ee ugu horreeya Abriil 18 ama kadib, illaa $ 15 bishiiba hadda. Heerarka Tier 4 iyo Tier 3 waa in laga soo ridaa min $ 14 iyo $ 12 siday u kala horreeyaan ilaa $ 16 iyo $ 13, halka qiimaha Tier 1 iyo Tier 2 ay ahaanayaan sidii hore, 7 iyo 9 doollar siday u kala horreeyaan.
Kuwani si dhib yar maaha waxa aan ugu yeerno & isbeddello culus, laakiin dabcan, kharashyada macmiilka T-Mobile ee lagu ilaalinayo qorshaha Tier 4 ama Tier 5 ayaa isugeyn kara. Dhinaca dhalaalka, the Barnaamijka Badbaadinta 360 waxaa ku jira waxyaabo badan oo waaweyn , laga bilaabo luminta, xatooyada, iyo caymiska dhaawaca shilka illaa $ 29 adeegyada bedelka shaashadda, amniga McAfee, taageerada tiknoolajiyada ee Tech PHD, JUMP! casriyeyn, iyo haa, xitaa AppleCare 'iDevices' u qalma '.
ipad air 2 heshiiska bartilmaameedka
waa maxay single qaado samsung
xirashada android 2.0 zenwatch 3
Kaamirooyinka iPhone 8 Plus iyo iPhone 7 Plus marka la barbar dhigo: run ahaantii wax badan oo faraq ah ma jiraa?
Ma ogtahay in Samsung soo saartay taleefanka gacanta ee ugu horeeya ee ku shaqeeya tamarta cadceeda.
Bummer: Samsung & apos; cusub ee Galaxy Tab S7 FE iyo Tab A7 Lite waxay heli doonaan oo keliya cusbooneysiin saddex-biloodle ah
Telefoonada ugu dhaqsaha badan
Verizon waxay asal ahaan bog ka qaadaneysaa buugga ciyaaraha ee T-Mobile & apos; oo leh xayeysiin cusub oo cusub oo 5G ah
Moto G5 Plus Dib u eegis
Kadib markuu ansaxiyo isku biiritaanka T-Mobile / Sprint, Tracfone wuxuu sooxuli doonaa shabakada ugufiican ee SmartSIM
Lacag: Kaydso $ 100 shirkadda Apple & apos; s Beats Solo3 sameecadaha dhegaha la 'ee Best Buy
Qiimaha waddanka Apple iPhone 6s: iyo sumadda ugu sarreysa waxay aadeysaa ...?
Iibinta kiniiniga weyn ee dabka ee 'Amazon & apos' ee 2021 ayaa halkan yaal